Iinkqubo zakwa-Nokia kunye neBentley zomeleza umanyano lobuchule kunye namanyathelo otyalo mali ngokudibeneyo- iGeofumadas
I-Siemens kunye ne-Bentley Systems zomeleza ukusebenzisana kwazo kunye neenkqubo zokutyalomali
Isibonelelo esitsha esihlangeneyo sisebenzisa ngokunxulumene nemeko yolwazi oluxhumene ne-Teamcenter kunye neBentley ukwandisa umkhiqizo wezityalo, ukukhawulezisa ukuhanjiswa nokunciphisa iindleko.
Isicwangciso sokuqulunqwa kwe-digital kwiphelo lokugqibela sakha amawele adibeneyo adibeneyo kunye nenjongo yesimo sokulawula ubunzima kunye nokulinganisa ukusebenza kwezityalo ezihlakaniphile.
Siemens PLM Software wabhengeza namhlanje Bentley Systems, i iinkampani esihlanganisiweyo ukubonelela iiprojekthi ezinkulu ngakumbi ngobuchule, edibanisa Teamcenter® portfolio kunye ProjectWise kunye Bentley enxulumene isisombululo bume data (CDE). Teamcenter lulawulo ubomi umjikelo yolawulo lwemveliso inkqubo (PLM) ezininzi ezisetyenziswayo kakhulu ehlabathini kwaye liqonga intsebenziswano ProjectWise lonikezelo yeprojekthi 43 50-mveliso best yoyilo in Engineering News Record. Isondlo esitsha siqhubeka kunye noqhagamshelwano lobuchule be-Siemens kunye neBentley olwenziwe kwi-2016, kwaye luza kwandisa ukubonakala kwezoshishino ngokulawulwa kweenkqubo zobunjineli kunye nokwakhiwa kweeprojekthi ezinkulu.
«Xa ufudukela kwitekhnoloji yedijithali, umsebenzi weenjineli kunye nabakhi uya usiba ngokuxhomekeka kumxholo wedijithali kunye nezinto zedijithali ezijikeleze ngaphakathi nakwiiprojekthi zeziseko zophuhliso»,
Uthi uGreg Bentley, i-CEO yeBentley Systems.
“Njengoko sisenza ukuhanjiswa kweprojekthi kushishino, kuyasivuyisa ukuba sisebenzisane nabakwaNokia ukwandisa ukufikelela kwe-CDE komsebenzi wethu wedijithali ngaphaya kweeprojekthi ezinkulu. Ngokudityaniswa kwe-Teamcenter PLM, ukunxibelelana kwamawele edatha yedijithali ngoku kungandiswa ngaphakathi kweshishini labo kwaye kwandise izinto zabo ezenziweyo: ukuqhubela phambili isiseko sophuhliso ngeDijithali yedijithali! «
Ukukhokela lale kwezobunjineli iinkqubo zolawulo iimfuno Teamcenter, kunye namacandelo wobomi yenzelwe yokulinganisa, ngoku zincediswe CDE Bentley ukuba abambe le projekthi ngamawele digital. Amawele edijithali yeprojekti ngokuzenzekelayo ukulungelelanisa idijithali kunye nokutshintsha ukuvumelanisa kunye neenkcukacha zokunikezela kweprojekthi, okuvumela ukuhlaziywa kwamazwe okuqhubekayo nokubanzi. Ukuchonga isityalo ukususela ekuqaleni kweprojekthi kuvumela ulwahlulo kunye nokusabalalisa idatha ngendlela enokutsha kwaye ephathekayo. Ngokudibanisa iikhamfa zedijithali kunye nentambo yedijithali eqhubekayo, iinkampani zinokunciphisa iindleko zokuhambisa iiprojekthi kwaye ziphephe iindleko eziphezulu, kwaye zinokuphucula umgama osebenzayo ngokunyusa umkhiqizo wezityalo kunye nokunciphisa iindleko zokusebenza. Iinkampani ngoku zikwazi ukufezekisa imisebenzi yokusebenza yedijithali ehambelanayo eyenza uqoqosho lweprojekthi, ulawulo lweprojekthi kunye nokulawulwa kweeprojekthi ukukhawuleza ukuhanjiswa kweeprojekthi ezinkulu, ukunciphisa iindleko zokuphucula nokuphucula iziphumo zeprojekthi ezihambelana iinjongo.
Kwimizi mveliso amandla eziluncedo, umzekelo, banikwe uqikelelo amandla lwangoku, iinkampani kufuneka asebenze kakuhle kwaye iindleko ngempumelelo ukuphumeza iiprojekthi zophuculo capital ngendlela. Ngokwesiko, ezi projekthi ezinzima kwaye zibiza kakhulu zinamaqela amaninzi, ngaphaya kobunjineli kunye nokwakhiwa, ezisebenza ngokuzimeleyo ukuqhuba le projekthi. Teamcenter uqhebeke kunikezelo projekthi, i-CDE ivumela ukubonakala phezu imifuziselo digital wireless ezinxulumene 2D kunye 3D dynamically bakwazi ukubonisa inqanaba le projekthi. Oku kuvumela ukuhambelana ngokuqhubekayo kwedatha nobunjineli, ukuba kufumaneke ngokubonakalayo nangokuhlalutyo, ngokufanelekileyo, ngamalungu eqela kulo lonke iqela kunye nenkxaso yokunikezela. Iimfaniso sokuhlanganisa engineering kunye nokwakhiwa iiprojekthi ezinkulu yale ndlela ezihlangeneyo kuvumela midlalo ezahlukeneyo kuyo yonke inkqubo yolawulo lweprojekthi ukuba sizilindele iingxaki yokwenene-ihlabathi kunye nokwenza izigqibo benolwazi phantsi-time real ukuqonda igalelo nayiphi na utshintsho loyilo. Isisombululo siya kufumaneka kwimarike ukususela ekuqaleni kwe-2019.
«Abanini / abaqhubi kunye nobunjineli, abathengi kunye neenkampani zokwakha (i-EPC) kushishino kufuneka banciphise iindleko kwaye bazise iiprojekthi ngokukuko, kwaye esi sisombululo sedijithali sitsha siqhuba iinkqubo zeshishini elisekwe kwidatha ukulungiselela ukwenziwa kweeprojekthi kunye isityalo »,
uthe uTony. Hemmelgarn, CEO we-Siemens PLM Software.
Ngetekhnoloji yamawele edijithali, esi sisombululo sivumela idatha yobunjineli ukuba ihambe phakathi kwabachaphazelekayo kwiprojekthi enkulu, kwaye iya kuvuma uluhlu olubanzi lwamatyala oshishino lokusebenzisa. "
I-Siemens PLM Software, i-unit unit ye-Siemens Digital Factory Division, isibonelelo sehlabathi sekhompyutha kwisisombululo se-software ukuqhuba ukuguqulwa kwedijithali kweshishini, ukudala amathuba amatsha kubakhiqizi ukuqonda izinto ezintsha. Izinze e Plano, Texas, kwaye ngaphezu kwama 140,000 abathengi ehlabathini lonke, Siemens PLM Software isebenza kunye neenkampani zabo bonke ubukhulu ukuguqula indlela izimvo beza ebomini, iimveliso indlela zenziwa nendlela apho iimveliso kunye nezinto eziphathekayo zisetyenziswa kwaye ziqondwa. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe ngeemveliso zeenkonzo ze-Siemens PLM kunye neenkonzo, tyelela www.siemens.com/plm.
I-Siemens AG (eBerlin naseMunich) yombane wetheknoloji yehlabathi jikelele ebonisa ukugqwesa kwezobunjineli, ubuqili, ubuqili, ukuthembeka kunye namazwe ngamazwe e-170 iminyaka. Inkampani isebenza emhlabeni wonke, igxininise kwimimandla yombanezelo, ukuzenzekelayo kunye nokudibanisa. I-Siemens ingomnye wabavelisi abakhulu behlabathi abasebenzayo bezobuchwepheshe obunokwenza amandla kunye nolondolozo. I-Siemens iyinkonzo ehamba phambili yokuveliswa kwamandla kunye nezisombululo zokuhambisa amandla kunye novulindlela kwizisombululo zezakhiwo, kunye nokuzenzekelayo, ukuqhuba kunye nezixhobo zesisombululo zoshishino. Le nkampani kwakhona ngumboneleli ophambili izixhobo umfanekiso zonyango, ezifana neenkqubo ebaliwe Itomography kunye nemagnethi livakale umfanekiso, ingumkhokeli kuxilongo elebhu kunye lwezonyango IT. Kulo 2017 kunyaka werhafu, leyo waphela ngoSeptemba 30 2017, Siemens zabangela inzuzo € 83.0 billion kunye nengeniso nomnatha € 6.2 billion. Ekupheleni kukaSeptemba we-2017, inkampani yayinabasebenzi be-377,000 kuwo wonke umhlaba. Olunye ulwazi lufumaneka kwi-Intanethi www.siemens.com.
I-Bentley Systems iyinkokeli yehlabathi jikelele ekuboneleleni ngeenjineli, abacwangcisi, abaqeqeshi bee geospatial, abakhi kunye nabanini-mhlaba abanesisombululo esiphezulu seekhompyutha ukuqhubela phambili ukwakhiwa, ukwakhiwa kunye nokusebenza kwezibonelelo. Abasebenzisi baseBentley baxhamla ngokuhamba kolwazi kuwo onke amacandelo okuqeqesha kunye nayo yonke imijikelezo yokuphila kwiprojekthi ukuhambisa iiprojekthi kunye neempahla ngokubhetele ukusebenza. izisombululo Bentley ziquka izicelo modeling ulwazi MicroStation, iinkonzo kusebenzisana ProjectWise ukunikezela iiprojekthi kunye neenkonzo imisebenzi ezihlangeneyo AssetWise ukuphumeza iziseko okrelekrele, intw 'iinkonzo ilawulwa ezibanzi eziqhutywayo izicwangciso impumelelo ngomntu
Eyilwe kwi-1984, i-Bentley inamaqabane angaphezu kwama-3.500 kumazwe angama-50 kwaye ilandelwe ukugqithisa umlinganiselo wonyaka werhafu ye-700 yezigidi. Ukususela kwi-2012, uBentley uye watyala imali engaphezulu kwe-$ 1 yezigidigidi kuphando, uphuhliso kunye nokufumana. www.bentley.com
Post edlulileyo«Ngaphambilini Abokugqibela kumabhaso “woNyaka kulwakhiwo lwezibonelelo”
Post Next I-6 geo-engineering zeprinteli zokukhuphela mahalaOkulandelayo »